Tsatoka antsy, lozam-pifamoivoizana: efatra ny maty nandritra ny fetin’ny faran’ny taona… | NewsMada
Tsatoka antsy, lozam-pifamoivoizana: efatra ny maty nandritra ny fetin’ny faran’ny taona…
Ratsy fiafarana ny fankalazana ny fetin’ny faran’ny taona sy fiandrasana ny taom-baovao ho an’ny sokajin’olona sasany eto an-dRenivohitra. Tetsy amin’ny HJRA, nahatratra efatra ny namoy ny ainy noho ny lozam-pifamoivoizana sy tsatoka antsy…
Efatra ny isan’ny olona maty nentina teny amin’ny HJRA nandritra ny fety teo. Nisy tamin’ireo ny matin’ny tsatok’antsy noho ny asa ratsy. Olona roa ihany koa ny matin’ny lozam-pifamoivoizana ka maty tamin’ny loza vokatry ny moto ny iray ary ny faharoa, noho ny fandonan’ny fiara azy teny By Pass. Nitsoaka ilay fiara nahafaty olona io. Ny fahefatra kosa, tsy fantatra ny nahafaty azy fa naterina teny amin’ny HJRA.
Nitombo ny olona nentina teny amin’ny hopitaly raha noharina ny tamin’ny fetin’ny Krismasy teo. Nahatratra 259 ny isan’ireo olona nentina teny amin’ny Urgence, ny faran’ny taona sy ny taom-baovao.
Nahatratra 66 ny loza samihafa, 28 ny lozam-pifamoivoizana, 19 teny amin’ny arabe, ary 14 ny loza tany an-trano. Nisy tamin’ireo olona ireo ny naiditra hopitaly mihitsy ary nisy ny nalefa nody rehefa nahazo ny fitsaboana sahaza azy. Tsy vitsy ireo adiady an-dalambe ka anisan’izany ny nahatonga ny tsatok’antsy nahafatesana olona iray.
Olona efatra nararin’ny sakafo
Nahatratra 18 ny isan’ny olona nentina tao amin’ny Reamed HJRA ka anisan’izany ny olona efatra nararin’ny sakafo. Nahazo ny fitsaboana sahaza azy ireo ary efa nahazo nody. Olona telo ny narary noho ny fitsotroan-toaka be loatra. Nisy ihany koa ny olona efatra nikasa hamono tena, saingy voavonjy ara-potoana izy ireo.
Amin’ny ankapobeny, nirindra ny asan’ny dokotera tamin’ny sampana vonjy taitra sy ny Réamed teny amin’ny HJRA. Efa asa fanao isan’andro ihany ireo, saingy kosa manantombo ny isan’ny miasa sy ny fahamalinana rehefa amin’ny andro fety. Mitohy toy ny isan’andro ny asan’izy ireo.